XOG: Wakiilada B/Caalamka oo ku soo biiray Mooshinka ka dhanka Xukuumada RW kheyre & Kiiska Qalbi dhagax… | Badweyn.com
XOG: Wakiilada B/Caalamka oo ku soo biiray Mooshinka ka dhanka Xukuumada RW kheyre & Kiiska Qalbi dhagax…
Beesha Caalamka ayaa isku dayaysa inay door ka ciyaarto Xalinta Xiisadda Siyaasadeed ee ka taagan Muqdisho, iyadoona Ergayga Qaramadda Midoobay, Micheal Keating uu la kulmay Madaxda ugu saraysa Dowladda Somalia.
Danjirayaasha Dalalka Shisheeye u fadhiya Somalia ayaa ugu yeeray Xarunta Xalane, Agaasimaha Guud ee Hay’adda Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed, C/laahi Sanbaloolshe oo ay wax ka waydiiyeen arrinta dooda badan dhalisay ee Muwaadinka Soomaaliga ah ee loo dhiibay Itoobiya. Waxayna sidoo kale ka dalbadeen faah faahin sideey u wax u dhaceen ah inuu siiyo.
Sanbaloolshe ayaa u sheegay Beesha Caalamka in arrintan doorka NISA ay ku lahayd ku koobnaa oo kaliya inay fuliso Amarka Madaxda Qaranka oo faray inuu Qalbidhagax ku wareejiyo Itoobiya, Wuxuuna safiiradda u soo bandhigay Fariin Qoraaleedyo ay wadaageen Isaga, Madaxwaynaha, iyo Raiisulwasaaraha, isagoona u raaciyay inuu waliba hayo Codad la xiriira arrintan.
Beesha Caalamka oo ka walwalsan Xiisaddan, cabsina ka qaba inay keento Kacdoon Shacab oo aan la xakamayn karin iyo inay meesha ka baxdo Dowladda Somalia ee ay taageerto Qaramadda Midoobay ayaa u soo diray Madaxtooyo Ergayga Qaramadda Midoobay u qaabilsan Somalia, Micheal Keating.
Micheal Keating waxa uu kulamo gooni gooni ah la qaatay Madaxwaynaha, Raiisul Wasaaraha, iyo Gudoonka Baarlamaanka, wuxuuna dhamaantood la wadaagay walaaca ay ka qabaan Xiisadan Siyaasadeed inay sababto burbur ku yimaada Hay’adaha Dowliga ah ee Somalia.
Madaxwayne Farmaajo ayaa isna dhiniciisa la wadaagay Keating walaacan oo kale inuu qabo, isla markaana ay ahayd qalad dhacay talaabadii ay Xukuumaddu ku wareejisay C/kariin Qalbidhagax, isla markaana uu isku dayayo inuu u helo Xal, Wuxuuna ka codsaday Beesha Caalamka inay door ka ciyaaraan xalinta Xasaradan.
Ma Cadda waxay ka badali karto dhex dhexaadinta Beesha Caalamka Cakirnaanta Siyaasadeed ee ka taagan Muqdisho, iyadoona bari ay Baarlamaanka Somalia u madlan yihiin ka doodista Qadiyadda Qalbidhagax.